सन्तवीरको सम्झनामा उनको कृतिको चर्चा : पाँच लाखको पुरस्कार कोष घोषणा – Everest Times News
२०७५ मंसिर ८, शनिबार २१:१७
तामाङ सर्जक कर्णेल सन्तवीर लामा पाख्रिनको १२१ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा उनले लेखेको ‘ताम्बा काइतेन ह्वाई रिमठिम’ किताबको परिचर्चा गरिएको छ।
एभरेस्ट टाइम्सका सम्पादक एवं रेडियो हिमालयका बोर्ड अफ ट्रस्टी ङिमा पाख्रिनले पुरस्कार कोष घोषणाको प्रशंसा गर्दै आफू पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। उनले क्यालिफोर्नियामा रहेको सोनाम मोक्तान, न्युयोर्कमा रहेका छेमाङ तामाङलगायतसमेत पुरस्कारको कोषमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। कार्यक्रममा तामाङ साहित्य, कला र अध्ययन क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
तामाङ भाषा, सांस्कृति र धर्मका धरोहर क. सन्तवीर लामा पाख्रिनको निधन वि.स. २०२६ फागुन १ गते काठमाडौको वानेश्वरमा भएको थियो। उनको कदर गर्दै तामाङ भाषा, साहित्य संस्कृति र सञ्चारकर्मीहरुले वि.स. २०४९ देखि हरेक बर्षको मंसिर ८ गते लामाको जन्मजयन्ती मनाउदै आएको छ।